Mamaivay ny tsikera mahazo ilay tantara foronina miresaka ankohonana meksikana nifindramonina ho any Etazonia · Global Voices teny Malagasy
Setriny mahery avy amin'ny Twitter no milaza ny boky ho tsy mitandro fihetsehampo sy feno hevi-draikitra
Voadika ny 24 Jona 2020 5:08 GMT
Vakio amin'ny teny English, Italiano, Français, Ελληνικά, Nederlands, Español
Tamba-tsary nataon'i Melissa Vida ahitna ireo lahatsoratra Twitter sy ny fonon'ny boky “American Dirt” nosoratan'i Jeanine Cummins, notsoahana avy amin'ny kaonty Twitter-n'ny mpanoratra @jeaninecummins
Nahatezitra ireo vondrom-piarahamonina meksikana, Chicano ary Latina ao amin'ny Twitter ny boky vaovao nosoratan'i Jeanine Cummins mitondra ny lohateny hoe “American Dirt”, izay milaza ny tantara ho mifandraika amin'ny pôrnô ara-pahantrana sy mandiso lohahevitra iray efa diso fantatry ny Meksikana an'arivony: ny fifindra-monina.
Ny tantara an-tsoratra dia milaza ny reny meksikana iray, Lydia, izay, nandositra ny herisetra ao Meksika, nifindra niaraka tamin'ny zanany lahy nankany Etazonia. Notehafan'ny mpanoratra malaza tahaka an'i Stephen King sy Sandra Cisneros, ary ireo mpanao tsikera literera sy Oprah Winfrey (izay nampiditra azy ho ao amin'ny kliobam-pamakiam-boky, ity boky ity. Ny Flatiron Books, izay notaterina fa nanokana tetibola mihoatra ny 100.000 dolara amerikana, no namoaka ny boky ary efa voadika sahady ho amin'ny teny espaniola sy boligara. Efa resahana ihany koa no hanaovana azy ho filma.
Nohazavain'ny mpanoratra Cummins ao amin'ny naotin'ny boky ny antony nanoratany ilay tantara, ary nekeny ihany koa fa “olona somary matroka kokoa noho izy” no tokony nanoratra azy.
Amin'ny ratsy indrindra isika mahita [ny mpifindramonina] ho tahaka ny andian-jiolahy mandany harena, ary amin'ny tsara indrindra isika mahita azy ireo ho karazan'olona matroka tava tsy misy endrika, tsy misy mpiaro, mahantra, mitady vonjy eo amin'ny tokonam-baravarantsika. Ankavitsiana ihany isika no mieritreritra azy ireny ho olombelona mitovy amintsika.
Tsy Meksikana i Cummins ary manondro azy ho fotsy tamin'ny taona 2015, ary taorian'izany no nilaza tao amin'ny momba azy tao amin'ny Twitter fa “Irlandaisa [sic]/Boricua/Persona” (Irlandey/Portorikana/olombelona) izy ary manana renibe avy ao Pôrtô Rikô. Manakiana ny zava-misy ny ankamaroan'ny olona fa mampiseho fitsarana an-tendrony momba ireo Meksikana ny tantara soratan'i Jeanine Cummins.
Tao amin'ny Twitter, milaza ireo fanehoan-kevitra manohitra fa tsy mijery fihetseham-po, ivelambelany fotsiny sy tsy maneho ny vondrom-piarahamonina Latina Amerikana ao Etazonia ilay boky.
Nilaza ilay mpanoratra malaza Julissa Arce Raya hoe:
Anisan'ny @oprahsbookclub ankehitriny ny #Americandirt. Amin'ny maha mpifindra-monina Meksikana, izay tsy nanana taratasy, afaka milaza malalaka aho fa manimba, manao fitsarana an-tendrony ary manimba ny fanehoana ny zava-niainanay ity boky ity. Henoy izahay azafady rehefa miteny aminao, tsy izy io boky io.
Mitaraina momba ny fanaintainan'ny mpifindra-monina noho ilay boky ilay mpisera Twitter Goatemalteka sady Meksikana-Amerikana manana solon'anarana hoe Polemicist
Raha hividy sy hamaky ny #AmericanDirt ianao, dia fantaro azafady fa manaraka ny fomban-drazana ela niainana amin'ny fanehoana tafahoatra ny fiainana sy ny zava-niainan'ireo mpifindra-monina izany. Tsy maneho ny maha-olona ny mamintina azy ireo [sy ny fiainany] ho amin'ny hevi-draikitra “manezin'ny foara”.
Maro ireo olona nisioka indray ny fandinihana avy amin'ilay mpanoratra Myriam Gurba izay navoaka tao amin'ny gazety akademika Tropics of Meta. Voatsikera ho mitantana fampitam-baovao feminista ilay fandinihana tany am-boalohany taorian'ny filazana fa tsy dia malaza loatra i Gurba “hanoratra tsikera ratsy tahaka izany”.
Ao amin'ny lahatsorany i Gurba milaza fa mameno ny fitantarana ny “soramandry teny espaniola tahaka ny ‘carajo,’ ‘mijo,’ ary ny ‘amigo’, izay miteraka fiantraikany mitovy amin'ny fividianana taharon-tsakafo taco any amin'ny fivarotana. Nampiany fa tsy azo itokisana ny tantaran'i Lydia noho ilay olonta tantaraina ho gaga hatrany amin'ny herisetra mampijaly an'i Meksika.
Ny fahitana an'i Lydia ho gaga hatrany amin'ny fiainana andavanandron'ny fireneny, fiainana haiko tsara amin'ny maha- chicana ahy miaina ao en el norte [avaratra], no lasa mampihevitra ahy fa … Tsy Meksikana azo itokisana i Lydia. Hita hoe mijery ny tanindrazany amin'ny mason'ny mpizahatany amerikana milalao tafahoatra ny dona ara-pihetsehampo izy.
Tsikerain'i Gurba ny tsy fisian'ny antony politika mahatonga ny fifindra-monina, ary dia nizara boky nosoratan'ny mpanoratra Latinó izy ao amin'ny kaonty Twitter.
Ho an'i Esmeralda Bermudez, Salvadoriana-Amerikana mpànoratra gazety ho an'i Los Angeles Times, ny fototry ny olana dia ny hantsana ao amin'ny tontolon'ny famoahana amerikana izay fotsy hoditra ny ankamaroan'ny mpanora-gazety Amerikana Avaratra.
Tsy voatery ho latinô mpifindramonina vao manoratra momba ny mpifindramonina. Nanana mpitari-dalana fotsy hoditra aho izay hajaiko noho ny fiezahan-dry zareo nihoatra ny fetran-dry zareo mba hamantarana vondrom-piarahamonina iray. Ny olana amin'ny sehatra literera dia mpanoratra, mpiasa, mpitsikera ary mpiambina ny antanantohatra fotsy hoditra no mifehy azy.
Nolazainy fa vokatr'io hantsana mampisara-bazana io, voafafa ary matetika no tsy hita eny amin'ny talantalan'ny fivarotam-boky ny tantara avoakan'ny Latinô Amerikana miresaka ny zava-niainandry zareo manokana.
Ao amin'ny sehatra maha-bitika ny Latinô, matetika ny tantaranay no tsipahina, afintina, kitikitihina tsy amin'ny tokony ho izy, tsy azo, angalarina, misy maka ho azy, trandrahana, sorotsorohina, averina fonosina indray mba ho mora telin’ny fotsy hoditra mpanjifa. Ary any amin'ny farany ny tantaranay nampanginina – tsy taza-maso.
Rehefa nahazo fahombiazana ny randran-dresak'i Esmeralda Bermudez ao amin'ny Twitter, dia nolazainy fa nanampina lalana azy i Jeanine Cummins, izay toy ny mampihevitra hoe tsy vonon-kiresaka amin'ny vondrom-piarahamonina voahoso-potaka ao amin'ny tantara an-tsoratra ilay mpanoratra.
Mbola nanampy trotraka tamin'ny ratra ny nikarakaran'ny Flatiron Books lanonam-pamoahana ny “American Dirt” izay ahitana ny latabatra ho an'ny olona nasaina voaravaka tariby mikinifinify, maka ny endriky ny fonomboky, ary ahitana ny rindrin'ny fanasarahana an'i Etazonia amin'i Meksika ihany koa. Ny iantsoan'i John Picacio mpandravaka ny sary dia “Mexploitation” :
Mahita fa Meksikana maro no mizara ny lahatsoratra saingy tsapako fa mbola tsy ampy izany. Saripika : mey 2019, lanonan'ny mpivaro-boky avy amin'ny Flatiron Books noho ny fivoahan'ny boky #AmericanDirt, izany rehetra izany voaravaka tariby mikinifinify eo afovoany nampiasaina hanaovana marketing. Maharikoriko. #Mexploitation.
Hita fa toa tsy mbola hitsahatra ao anatin'ny fotoana fohy ny tsikera ho azon'ity tantara an-tsoratra ity.
Afrika Mainty 15 ora izay